Is-yeelyeelka Weyn Xiliga 3: Taariikhda Siideynta: Ogow goorta Taxanaha Soo socda la sii deyn doono! - Madadaalo
Is-yeelyeelka Weyn Xiliga 3: Taariikhda Siideynta: Ogow goorta Taxanaha Soo socda la sii deyn doono!
Xiliga 3-aad iska yeelyeelka WacanNetflix wali ma cusboonaysiin taxanaha anime, Pretender Great, xilli seddexaad laga bilaabo Noofambar 2021, taageerayaashuna waxay bilaabeen inay la yaabaan haddii xilli 2 uu ahaa markii ugu dambeysay ee ay ka heli doonaan waxyaabo cusub taxanaha.
Dabcan, sababtoo ah ma jirin ogeysiisyo burin ah, waxaan aad ugu kalsoonaan karnaa in barnaamijku soo laaban doono mustaqbalka. Intaa waxaa dheer, marka la eego in ay jiraan waxyaabo ku filan oo ku filan xilli saddexaad, waxaan si kalsooni leh u saadaalin karnaa in taxanaha asalka ah ee Netflix la cusbooneysiin doono.
Xitaa markaa, Netflix wali ma uusan ansixin xilli saddexaad ee Pretender-ka Wayn, waxaadna shaki la'aan la yaaban tahay goorta la sii deyn doono. Hoos waxaa ah saadaasha saxda ah.
Xilliga saddexaad ee Pretender-ka Wayn ayaa la daabici doonaa sanadkan?
Sababtoo ah sanadka waxaa ka haray hal bil mana jirto teasers, trailers, ama art key for season 3 oo la sii daayay, waa wax ka badan macquul ah in Great Pretender season 3 aan la sii deyn doonin 2021, in kasta oo anime qeybtiisa ugu dambeysay ay ka soo muuqatay Netflix sanad ka hor bishaan.
La'aanta iska yeelyeelka weyn ee 2021 ayaa laga yaabaa inay niyad jabto, laakiin looma baahna in laga welwelo sababtoo ah waxaan filaynaa xilli cusub inuu dhowaan yimaado.
Taariikhda la sii daayo xilliga saddexaad ee Pretender-ka Wayn waa la dejiyay.
Siideynta Xiliga 3 ee The Isyeelyeel Weyn Waxay u badan tahay suurtogalnimada agagaarka 2022. Waxay siisaa qorayaasha waqti ku filan si ay u abuuraan qaybo cusub, iyo sidoo kale Netflix waqti ku filan oo ay ku majaajiloodaan oo ay kor ugu qaadaan sii deynta dhow, taasoo dhalinaysa farxad.
Waa inaan sugno ilaa macluumaad dheeri ah laga helayo si aan u aragno in xilligaan 2022 ee saadaasha 3 ay sax tahay, laakiin waxaan si hubaal ah u ogaan doonaa marka macluumaad dheeri ah la soo saaro.
Akhri wax dheeraad ah:-
Xiliga Nolosha Jacaylka 3: Taariikhda Siideynta: Jilayaasha, Shirqoolkii, Faallooyin, Trailers, & Qaswadayaasha 2022!
Ku Soo Degista Shilku Xiliga 2: Taariikhda Siideynta: Jilayaasha, Shirqoolkii, Trailers, & Qaswadayaasha 2022!
Xiliga 2-aad Mac Gruber- Taariikhda Siideynta Macquulka ah & Jidka, Shirqoolkii | Macluumaad Dhameystiran!
In kasta oo aan sugno Netflix si ay u go'aansato mustaqbalka taxanaha, waxaad la qabsan kartaa xilliyadii hore ee Great Pretender ee Netflix hadda.
Qabo Mars: Ciyaarta - Taariikhda Siideynta, Trailer, & in ka badan
Xilliga Dota 3: Taariikhda Siideynta: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Netflix
dejin Alexa on pc
fmovies waa ammaan in la isticmaalo
filimada bilaashka ah ee khadka tooska ah ha iska qorin
ka daawo filimada kirismaska ​​si bilaash ah adiga oo aan soo dejin
2000: qalad shabakad